Tuesday, 19 Jun, 2018 10:56 AM
काठमाडौं । प्रविधिले जति सहजता र सुविधा दिएको छ, त्यति नै समस्याहरु पनि थप्दै गएको छ । सामाजिक सञ्जाल नेपाली समाजमा छोटो समयमै जसरी लोकप्रिय हुँदै गएको छ, त्यसैगरी समस्या पनि बन्दै गइरहेको छ ।
सामाजिक सञ्जाल लत त बन्दै गएको छ नै साथै यसबाट अपराधहरु समेत बढिरहेका छन् । काठमाडौंमा मात्र दैनिक औसत १० जना व्यक्तिहरु सामाजिक सञ्जालबाट पीडित भएर प्रहरीमा पुग्ने गरेका छन् । गम्भीर किमिसका अपराधमा संलग्नलाई प्रहरीले मुद्दा चलाउने गरेको छ, भने धेरै जसोमा मिलापत्र हुने गरेको छ ।
हालै सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी एउटा अनौठो अपराध काठमाडौंमा भएको छ । जसमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पतालमा स्नातकोत्तर (एमडी) पदमा अध्ययनरत एक चिकित्सक पक्राउ परेकी छिन् ।
जेठ २२ गते महानगरीय अपराध महाशाखाले चिकित्सक अस्मिता अधिकारीलाई पक्राउ गरेको हो । अष्ट्रेलियामा रहेकी एक नर्स र उनका प्रेमीविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा बेइज्जती गरेको आरोपमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो ।
तर, कहानी अलि फरक किसिमको छ । डा. अधिकारीकी एक साथी थिइन्, जो शिक्षण अस्पतालमै नर्स थिइन् । उनी अष्ट्रेलिया गइन् । अष्ट्रेलियामै एक युवकसँग उनको प्रेम सम्बन्ध जोडियो ।
तर, अस्मितालाई त्यो कुरा मन परेन । उनले आफ्नो साथीको प्रेम सम्बन्ध सहन सकिनन् । जसकारण नक्कली फेसबुक बनाएर दुवै जनाको बारेमा आपत्तिजनक कुराहरु फेसबुकमा पोष्ट गरेको अनुसन्धानमा आबद्ध प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् ।
सुरुमा कसले त्यसरी नक्कली फेसबुक बनाएर बेइज्जती ग¥यो भन्ने थाहा भएन । पछि अनुसन्धान गर्दा अस्मिताको संलग्नता देखिएपछि पीडित युवक युवतीका आफन्तहरुले प्रहरीमा उजुरी गरेर उनलाई पक्राउ गराएका हुन् ।
एक रात थुनेपछि अस्मिताका परिवारले प्रहरीमा हारगुहार गरे । भोलिपल्ट सहमति गरेर छुटिन् । पीडित परिवारले साइबर क्राइममा मुद्दा नै चलाउन माग गरेका थिए । तर, एमडी पढिरहेकी युवतीलाई मुद्दा चलाएर थुन्दा उनको करिअर बिग्रन सक्ने भन्दै पीडित परिवारलाई मनाएर सहमति गराएका थिए । यद्यपी डा. अस्मिताले भने आफूले नभई अरु कसैले आफ्नो मोबाइलबाट त्यस्तो काम गरेको हुनसक्ने दाबी गरेकी छिन् ।
महाशाखामा हरेक दिनजसो फेसबुक पीडितहरुको भिड लाग्ने गरेको छ । खासगरी प्रेममा प्रतिशोध लिन फेसबुकको दुरुपयोग हुने गरेको प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् । फेसबुकको दुरुपयोग गर्दा ३ वर्षसम्म जेल सजाय हुनसक्ने थाहा नपाएर पनि यस्ता अपराध बढेको हुनसक्ने प्रहरीको भनाइ छ ।